Erich Von Däniken nemabhuku ake ekunze ekunze | Zvazvino Zvinyorwa
Erich Von Däniken nemabhuku ake ekunze ekunze
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Fikisheni yesainzi, Vanyori, Mabhuku
Tiri kupemberera makore makumi mashanu eiyo kukunda kwemwedzi. Asi ndiani anotiudza kuti isu, vagari venyika yepasi, hatina kukwanisa kukunda (kana kushanyira isu) vamwe zvekunze kubva pamusoro pezvese zvakasikwa zvinozivikanwa? Izvi ndizvo zvakanyorwa nemunyori weSwitzerland Erich Von Daniken account mumabhuku ake uye anoti ichokwadi, ichipa humbowo pamusoro pezvose kubva pane zvakawanikwa pakuchera matongo. Izvi ndizvo 4 yake titles uko nhasi ndinotarisa.
1 Erich Von Daniken
1.1 Nhoroondo inonyepa
1.2 Ndarama yamwari
1.3 Kudzoka kwevamwari
1.4 Ndangariro dzeramangwana
Iye anozivikanwa nemabhuku ake pa ufology, kwainofumura dzidziso pamusoro pekushanyirwa kwezvisikwa zvepasi kupasi redu munguva yakapfuura. Kubva kunharaunda yesainzi idzi dzidziso dzakarongerwa se pseudoscience, asi Von Daniken has dambudziko rakakura pakati pevateveri vake uye anoenderera mberi nekupa zvakawanikwa pakuchera matongo seumboo kwekuvapo kwekunze kwenyika.
Izvo zvine anopfuura makumi maviri neshanu mabhuku akaburitswa yeavo vakatengesa Makopi makumi matanhatu nematatu emakopi kutenderera pasirese. Uye rakashandurwa kupinda kupfuura 30 mitauro. Aya ndiwo mamwe emazita ayo.
Iri bhuku rinotimutsa mimwe mibvunzo nezvake Voynich chinyorwa, anonyorwa nanhasi anoramba asinganzwisisike, kana paapokirifa Bhuku raEnoki yeTesitamende Yekare apo inotaura nezvezvinhu zvekudenga zvinouya pasi pano kuzorara nevanasikana vevanhu. Zvakare pamibvunzo mitsva yakakandwa kumusoro neongororo yazvino pamitsetse ye Nazca.
Una basa rinopokana uko Von Däniken anoenderera mberi nekupa humbowo hwevashanyi vekunze uko, mumaonero ake, kwave uye kukanganikwa uye kuvanzwa nenhoroondo yepamutemo.
Una chiono chinoshamisa nezve izvo zvinogoneka vatorwa vafambi vanogara papasi redu. Chikamu chepfungwa yekuti, kubva kwavo kusazivikanwa mavambo, ivo vakasvika kune yakaderera pasi mushure kurasikirwa nehondo huru munyika dzavo. Uye vaitofanira chinja kune iwo mamiriro yehupenyu. Makuru makuru epasi pevhu akadzivirirwa uye akacherwa, uye nekuwedzera vakaisawo nzvimbo dzenhema nezviteshi pane imwe nyika, yakazove yedu. Mukupedzisira, vakapedzisira vagara mairi mushure mekunge vavengi vavo vaparadza nyika iyo uye vakauya kuneyedu, uko kwavakavaka mabasa makuru ayo anongova masaririra nhasi.
Rimwe remabhuku ake inoonekwa seinonakidza pamusoro pekuvapo kwevatorwa munguva dzekare. Yakavakirwa nguva ino pa zvinyorwa zvakanyorwa ipapo, uye ikabatwa seinoyera, apo zvitendero, hunhu, hunhu netsika dzechinyakare zvakasanganiswa nezvido zvevanyori vavo. Ndokuenda Mwari kana vanhu vekudenga avo vakafemera, dai vasina kunyora kana kuraira zvakananga, iwo magwaro. Asi ndivanaani vaive vanyori ava kana vamwe vanyori vakaedza kuvanza?
Mune zita iri pfungwa yepakati ndeyekuti vanofungidzirwa kuti vashanyi vekunze vanoburitswa chitendero kumarudzi akasiyana-siyana ekare. Ava, mukuwedzera pakuvagamuchira savanamwari, naivowo vangadai vakaparadzira ruzivo rwehunyanzvi.
Von Däniken anopedzisa izvi nekudzidza akateedzana e 'humbowo' kana zviwanikwa zvakawanikwa pakati pezvasara zvevanhu ava vekare. Iyo inodudzirawo zvimwe zvinomiririrwa nehunyanzvi hwekare pasirese, senge iyo tsananguro yemifananidzo ye "vanoongorora muchadenga", mhepo yekunze neyemuchadenga mota, uye tekinoroji zvakaoma. Iye zvakare anotsanangura zvimwe zvinhu izvo zvaanotenda kuti zvakafanana mune dzimwe tsika dzisingaenderane.
Izvo zvakare zvinotora kuti iyo kubuda kwezvimwe zvitendero kuri kukonzerwa nerudzi rwekunze kwenyika. Izvi zvinosanganisira kumwe kududzirwa kweBhaibheri, kunyanya Testamente Yekare. Iye zvakare anoshamisika kuti tsika dzekutaura dzezvitendero zvakawanda zvine mareferenzi kune "vashanyi vanobva kune nyeredzi" uye mota dzinovatendera kuti vafambe nemhepo senge yekunze nzvimbo. Uye iyo inopa umpteenth muenzaniso weiyo inoshamisa kuvakwa kweiyo Great Pyramid yeCheops, muGiza. Icho chiratidzo chekusagona kwevanhu, kunyangwe nanhasi, kuzviita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Fikisheni yesainzi » Erich Von Däniken nemabhuku ake ekunze ekunze
Nhetembo dzaRosalía de Castro
Mwedzi. 7 kuverenga pamusoro pemakore makumi mashanu mushure mekukunda kwake.